merolagani - इथेरियमको मूल्य १० वर्षमा १० गुणाले बढ्न सक्ने साेधकर्ताकाे दावी, बिटक्वाइन कति पुग्ला ?
इथेरियमको मूल्य १० वर्षमा १० गुणाले बढ्न सक्ने साेधकर्ताकाे दावी, बिटक्वाइन कति पुग्ला ?
Oct 05, 2021 04:03 PM Merolagani
विश्वभरमा क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाईनकै चर्चा छ । हाल विश्वकै डिजिटल वा भर्चुअल करेन्सीमध्ये बिटक्वाईनको मूल्य सबैभन्दा धेरै रहेको छ । जसकारण पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बिटक्वाइनमा रहेको पाइएको छ । आउदो महिनासम्म ६४ हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार नोभेम्बरमा भने यसको मूल्य ९८ हजार डलर पुग्न सक्ने छ भने डिसेम्बरमा पुनः रेकर्ड तोड्दै एक लाख डलर पुग्ने आंकलन गरिएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा बिटक्वाईनको मूल्य एक हजार ३५ हजार डलर पुग्नेछ जुन हालको मूल्य भन्दा तीन गुणा बढि हुनेछ ।
विश्वको अर्को चर्चित करेन्सी इथेरियमको मूल्य १० वर्षमा १० गुणाले बढ्ने
यसैगरी विश्वको अर्को चर्चित करेन्सी इथेरियमको मूल्य अहिले तीन हजार ३८३.४१ डलर बराबर रहेको छ । यसको बजार पूँजीकरण ३९८.५५ अर्ब डलर छ । रिसर्च वेबसाइट फाइन्डर र यूकेस्थित स्टान्डर्ड चार्टड बैंकको विश्वव्यापी सोध टिमका अनुसार सन् २०२१को अन्तिमसम्ममा यो चार हजार ५१२ डलरसम्म पुग्न सक्ने संभावना छ ।
यस्तै सन् २०२५ सम्ममा एक इथेरियमको मूल्य १९ हजार ८४२ डलरको स्तरसम्म पुग्ने सक्छ ।स्टाण्डर्ड चार्टडका अनुसार इथेरियमको कार्यक्षमता र दक्षतामा थप सुधार हुनेछ ।
५९ प्रतिशत प्यानलिस्टले अहिलेको समय इथेरियम किन्ने सहि समय भएको बताएका छन् । यस्तै २८ प्रतिशत प्यानलिष्टहरुले लगानिकर्ताहरुलाई इथेरियम होल्डम राख्न सल्लाह दिइरहेका छन् । स्टाण्डर्ड चार्टडले भने आगामी १० वर्षमा यसको मूल्य १० गुणाले बढेर २६ हजार डलर देहि ३५ हजार डलरसम्मको उचाइमा पुग्न सक्ने बताएको छ ।
यसैगरी यकातिर सन् २०२२ मा इथेरियम सबैभन्दा धेरै खरिदबिक्री हुने क्रिप्टोकरेन्सी हुने ५१ प्रतिशत फाइण्डर रिसर्च प्यानलको आकलन रहेको छ भने अर्कातिर ४९ प्रतिशत प्यानलिस्टहरुले बिटक्वाईनमा सर्वाधिक लेनदेन हुने अनुमान गरेका छन् ।